Jasmine : 2012
Posted by စံပယ်ချို | Friday, December 28, 2012
ချစ်မကြီး မမစံပယ် မွေးနေ့အမှတ်တရ....
ရေခြား မြေခြား နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ
မိဝေး ဖဝေး ရင်ခွင်ဝေးလျက်
ခုဆို အမေပေးတဲ့ မွေးနေ့တစ်ခုတောင်
စံပယ်ချစ်တဲ့ လွင်ပြင့်လက်ကို အတူတူတွဲ
စပယ်ချို (မဒမ်လွင်ပြင်)အတွက် အမှတ်တရမွေးနေ့ ပိုစ် ရေးတင်လိုက်ပါတယ်
မွေးနေ့ တိုင်းကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်၍ ချစ်သော လွင်ပြင်လေးနဲ့ 
ရိုးမြေကျ ပေါင်းသင်းရပါစေ။ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစုဘ၀နဲ့ အတူ ဆံဖြူသွားကျိူး
သည်အထိ ဘ၀ကို အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်
မွေးနေ့ အကြောင်းပြောရင်း သီချင်းဟောင်းလေးပဲ ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်...;P
မွေးနေ့ ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း....တိုတိုနဲ့လိုရင်းကတော့ မွေးနေ့ ဆိုတာ မွေး
တဲ့နေ့ ဖြစ်ပါတယ် ။ လေးနက်စွာတွေးမယ်ဆိုရင်တော့ မွေးနေ့ ဆိုတာ အရမ်းကို
တန်ဖိုးရှိတဲ့နေ့ ပါ ။ အသက်တစ်နှစ်ကြီးသွားတာဖြစ်သလို အတွေးအခေါ် ဗဟုသု
တ ပညာအကုန်တိုးတက်လာတဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ ဆိုလည်းမမှားပါဘူး ။ တစ်နှစ်
တာလုပ်ဆောင်လာသမျှ ပြုမူပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့သမျှ ပြန်လည်သုံးသပ် ဆုံး
ဖြတ်ရမယ့် ပုစ္ဆာ တစ်ပုဒ်ဆိုလျှင်လည်း ငြင်းဖွယ်မရှိပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က အတိတ်ကို
နောက်ပြန်ကြည့်ပြီး ကောင်းတာသယ်. မကောင်းတာဖယ် နောင်လာမယ့် နှစ်
သစ်အတွက် စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့မှားခဲ့တာတွေပြင် ထားခဲ့တာတွေတင်ပြီးအနာ
ဂတ် ခရီးအတွက် အောင်မြင်မှုအစီစဉ် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲသင့်တဲ့ နေ့ ထူး တစ်ရက်
နေ့ ကောင်းတစ်နေ့ဆိုရင်လည်း( ကျနော်ထောက်ခံပါတယ်ခင်ဗျား ) ကိုယ့်ဟာ
ကိုယ်ပဲ ထောက်ခံလိုက်ပါတယ် ။ ရေးမယ်ဆိုမကုန်နိုင်အောင်ပါပဲ. အဖေနဲ့ အမေ
ရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်း အောက်မေ့ရမဲ့ အချိန်ခါလေးပါ ။ အဲ့တော့ အဲ့လို အဲ့လို..နေ့ 
ထူးလေးမှာ မဒမ်လွင်ပြင်တစ်ယောက် စိတ်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွားနဲ့မွေးနေ့ ပွဲကို
ဆင်နွှဲနိုင်ပါစေ မှားခဲ့သည်ရှိသော်ပြင်ဆင်ပြီး နောင်..အနာဂတ်နှစ်သစ်အတွက်
အောင်မြင်မှုအစီစဉ်တွေရေးဆွဲနိုင်ပါစေလို့ပြောကြားရင်း...........................။
ချစ်လှစွာသော.......သမက်ကလေး ( သမီးပေးမည်ဟု ပြောထားသောကြောင့်)
အရောင်မပြောင်းသော ဂီတ နဲ့
သက္ကရာဇ် တစ်ခုကို ဖြတ်ပြန်ပြီ......။
ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းသော မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေနော်
ယောက္ခမ ချစ်သမီးလေး မြတ်ရဲ့ ကိုယ်စားပါ
သမက်လောင်းလေးက ဆုတောင်းပေးသွားတယ်း)။
မ .... ဟူရာတောမှာဖြင့်
စ .... ပယ်တောမှာတင့်
ပယ် .ရတနာလို အချစ်မျိုးနဲ့
ချို ....မြမြ ကောင်းကင်အောက်
မိသားစုတွေ ခဏထားလို့ ပေါ့
မွေး ...မိခင် နဲ့ ကျွေး ဖခင်
နေ့ ...သစ်တိုင်း စခန်းသာ
( မကြီးဂျက်ရေ ဟတ်ပီးဘတ်နေ့ပါ ပျော်ရွှင်ပါစေ )
Posted by စံပယ်ချို | Thursday, December 27, 2012
နဘေတွေနဲ့ ပျိုမျစ်တဲ့ စံပယ်….
ကဗျာတွေနဲ့ ချိုမြိန်ဆဲ စံပယ်……….
လွင်ပြင်နဲ့ အိပ်မက် ကြိုးညှိတဲ့စံပယ်…
ဒီတစ်ဆောင်းလုံး ရနံ့တွေ သိုသိုဝှက်ဝှက်ပစ်လွှတ်လိုက်တာ
ရိုးမြေကျတဲ့အထိ ကာရန်တွေကို ဖွဖွလေးလိုက်ကောက်ရတုန်း………။
ရိုးမြေကျ (13.12.2012, 9:45pm)
မွေးနေ့အမှတ်တရ ပေါက်ကရ ကဗျာ
ချစ်သူလေး အနားရှိနေလို့ ။
Posted by စံပယ်ချို | Wednesday, December 19, 2012
Posted by စံပယ်ချို | Thursday, December 13, 2012
မရိုးသားမှုနဲ့ အခန်းဆက်နေတဲ့ လူတွေ
အပေါင်းအသင်း ဝေလာဝေးခဲ့တဲ့ ဘ၀
ဒါတွေသိရင် သင် နည်းနည်း ရှက်တတ်ပါစေတော့
မင်း အတွက် အရမ်းလဲ နောက်ကျနေပြီ
သင် ဘာများကူညီခဲ့ဖူးပါသလဲ ?
Christmas Presents လေးများကိုယူဆောင်ကြပါရှင်
Posted by စံပယ်ချို | Monday, December 10, 2012
မင်းရဲ့ နောက်က အရိပ်
Christmas Tree and Dividers လေးတွေပါ
Posted by စံပယ်ချို | Friday, December 7, 2012
Posted by စံပယ်ချို | Monday, December 3, 2012
အိပ်ချိန်တွေ နည်းနည်း လာတယ်
Posted by စံပယ်ချို | Saturday, December 1, 2012
(ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ဒီဇင်ဘာရောက်ပြီ ဆိုတာနဲ့
ကျွန်မရဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးမှာတော့
ဒီလကိုရောက်ပြီဆိုရင်ပဲ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးပျော်ကြပါတယ်)
Posted by စံပယ်ချို | Tuesday, November 27, 2012
Posted by စံပယ်ချို | Sunday, November 25, 2012
ကိုချူချာ မြို့တက်ပြီး အမဲသား ဝယ်သည်။ အမဲသားချက်နည်း ပြုတ်နည်းကိုပါ ရေးမှတ်လာခဲ့သည်။ ရွာသို့ ခြေလျင်ပြန်လာခဲ့ရာ လမ်းခရီးတွင် အမှောက်ပျိုးလာသဖြင့် တောထဲတွင် ညအိပ်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်။ ゞင်းအိပ်နေချိန်တွင် အမဲသားထုပ်ကို ဝံပုလွေ ဆွဲသွားသည်။ အိပ်ရာမှ နိုး၍ အမဲသားကို ဝံပုလွေ ဆွဲသွားကြောင်း သိသောအခါ ကိုချူချာ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်သည်။
ဟား ဟား ဟား။ တော်တော်တုံးတဲ့ ဝံပုလွေပဲ- အမဲသားကို ခိုးသွားသတဲ့။ ချက်နည်းက ငါ့ဆီမှာ ကျန်နေတာပဲ။ ဒင်း ဘာလုပ်လို့ ရမှာလဲ။ ဟဲ ဟဲ ။
ယောကျာင်္းပျောက်သွားသည့်အတွက် ကူညီ ရှာဖွေပေးပါရန် ရဲစခန်းသို့ မိန်းမဖြစ်သူ
လာပြောသည်။ ယောကျာင်္း၏ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို မေးမြန်းစုံစမ်းပြီးနောက် ရဲအရာရှိက
ကောင်းပြီလေ။ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားရှာပေးပါ့မယ်။ ဒါနဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ ယောကျာင်္းကို
ဖတ်ခဲ့ဖူးသော မောင်ကောင်းထိုက် ဟာသထဲမှ
Posted by စံပယ်ချို | Wednesday, November 21, 2012
တွယ်တာခြင်းတွေ ထာဝရ ရစ်ခွေနေတော့
Posted by စံပယ်ချို | Sunday, November 18, 2012
၁၉-၁၁-၂၀၁၂ တွင်ကျရောက်သော အဖြူရောင်နတ်သမီးအတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းကဗျာနဲ့ကိတ်မုန့်လေးပါ
ပြူတစ် ပြူတစ် နဲ့
အတု အပ တွေကို